ကျနော်တွေးမိသော” မြန်မာ့ တဘောင်”နှစ်ခုအကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျနော်တွေးမိသော” မြန်မာ့ တဘောင်”နှစ်ခုအကြောင်း
ကျနော်တွေးမိသော” မြန်မာ့ တဘောင်”နှစ်ခုအကြောင်း
Posted by ကြောင်လေး on Jul 13, 2012 in Creative Writing, Think Different | 25 comments
“ဇမ္ဗူဒီပါ လယျာ်တောင်ကျွန်းနမိတ်ထွန်း” တဲ့
“ဇမ္ဗူဒိတ် နမိတ်” တဲ့
“အင်းကို (သိပ်မသေချာပါ၊ကျနော်ဇဝေဇ၀ါဖြစ်နေတယ်) ဟင်္သာ နားလိမ့်မည်၊
ဟင်္သာကိုထီးရိုးရိုက်လိမ့်မည်၊ ထီးရိုးကို မိုးကြိုးပစ်လိမ့်မည်” တဲ့
“လူပျိုအမေ ဆန်တစ်စိပ်နဲ့ ရွှေမန်းတောင်ပေါ် အလုံပိတ်လို့ ပုန်းအိပ်ရမယ်” တဲ့…
“ဥသျှစ်တစ်တင်းနှမ်းတစ်တင်းနဲ့၊ ဒန့်ကျွဲပင် ပုခက်ဆင်”
ဆိုတာမျိုးတွေ ကလည်း ဖြစ်လာတော့မယောင်။
မကြာသေးခင်က အုတ်အော်သောင်းနင်းကိစ္စဖြစ်သွားတော့မှ တဘောင်နှစ်ခုကိုသတိရသွားမိတယ်။
ဇွန်လ အရေးအခင်းမဖြစ်ခင်အထိတော့ ဒီတဘောင်သိပ်မှန်တာပေါ့။
သိကြတဲ့အတိုင်းမန္တလေးကို ပြည်ကြီးပေါက်တရုတ်တွေ သိမ်းပိုက်လုလုဖြစ်နေတာ
အဲဒီတဘောင်အလုံးစုံ ဘယ်တော့ဖြစ်လာမှာလဲ ၊အလုံးစုံကောမှန်လာနိုင်ပါ့မလား သံသယဖြစ်မိတယ်…
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ “ရှိသည့်ဗမာအနောက်မှာ” လို့ဆိုထားတာ ဖြစ်ဖို့နေနေသာသာ
မြန်မာ့တဘောင်ကို တဘောင်အတိုင်းရေးပြီးတွေးမိတာလေး ချရေးဖို့ဖြစ်ကြောင်းဆိုတာပါ…..
“ကုလားနဲ့ ငါး အရုပ်ရေးပြရမယ်” တဲ့
အဲဒါကော ဘယ်တော့လဲဟင်? ၊ ဘယ်မှာလဲဟင်?၊ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲလား ကမ္ဘာမှာလား?……
ငါးဆိုတဲ့အကောင်ရဲ့ဥတစ်တောင့်ဟာ ဥ အလုံးရေ တသန်းကျော်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီလောက်ပေါက်ပွားနှုန်းမြန်လို့ လည်း တကမ္ဘာလုံးအတွက် စားမကုန်တဲ့
ရေပြင်တွေဆက်စပ်တည်ရှိနေသရွေ့ တော့ဒီသတ္တ၀ါတွေ စီးမျောပျံ့နှံ့နေဦးမှာပါ။
နောက် ကုလားလို့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးနှုန်းနေကြတဲ့ အိန္ဒိယ၊အာရပ်နွယ်ဖွားတွေပါ……
ချစ်တီး၊ ဂေါ်ရခါး၊ ပန်ချာပီ၊ဂေါ်ရင်ဂျီ၊ရေ၀တီ၊မွတ်ဆလင် စသည်ဖြင့် အစုံ အစုံပါပဲ။
ကျနော်မှတ်သားဖူးတာ “ကုလားခြောက်ဆယ်၊မြောက်ခြောက်ဆယ်” ဆိုလားပဲ၊
ဒီလောက်များတဲ့ အမျိုးအနွယ်တွေကရော ကမ္ဘာပေါ်က ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားမှာလဲ။
ကမ္ဘာကြီးက ရွာကြီးဖြစ်နေတာ ကူးလူးဆက်ဆံမှုကရှိနေမှာပဲလေ…….
အခုပဲကြည့် “တိုးလို့ သာလာလေရော့သတည်း” ဆိုတာလိုပဲ။
ကဲ …..ဒါဆို ဒီတဘောင် ဘာကြောင့်ပေါ်လာရသလဲ?၊ ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်လဲ?
ဆိုတာကို သက်ကြီးဝါကြီးရှေးမှီနောက်မှီ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများနဲ့ဗုဒ္ဓ၀င်၊မဟာဝင်၊ရာဇ၀င်၊ဂန္ထ၀င်၊
ပုံပြင်၊ဒန္တာရီ သမိုင်း၊လောကီ။လောကုတ်စာပေ ၊ အထွေထွေဗဟုသုတ ကြွယ်ဝကြတဲ့
ရွာသူားပညာရှိကြီးများက ဖြေကြားရှင်းလင်းပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါကြောင်း။ ။
အဲဒါက ဒီလို ရှိပါတယ်….
ဟုတ်တော့ မလိုလိုနဲ့ ..
ဘာမှလည်း ဟုတ်ဘူး ..
ဟိုလေ ပညာရှိတွေဖြေလိမ့်မယ် သများကပညာမရှိဘူး ….. ခစ်ခစ်ခစ်
ပညာရွှေအိုး ဟိုလူခိုးသွားတယ် ….
တဘောင် အဆိုအရ ငါးတိုင်းတော့ ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်.
ထိမ်းသိမ်းနေရတယ်လေ.. မမှတ်မိမှာစိုးလို့ အရုပ်ရေးပြနေရတာ ကြုံဖူးမယ်ထင်ပါရဲ့ ။
ကျန်ကိစ္စကတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် တွေးပေါ့ဗျာ…
ကျွန်တော်လဲ မသိပါ ။ဒါပေမဲ့ သူများပြောလို့ ကြားဘူးတာ က တရုတ်ကဖိ ရှမ်းကအိ ဗမာ အနောက်ပြေး လို့ဆိုထားတယ် ။အနောက်ဆိုတာ အနောက်နိုင်ငံတိုင်းပြည်များကို ဆိုလိုတာလို့ ပြောကြပါတယ် ။ရခိုင်တော့လုံးဝ မဟုတ်ပါ။တကယ်ပါ ခုလဲကြည့်လေ မြန်မာ တော်တော်များများဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အများကြီးပါ။မြန်မာ မရှိတဲ့တိုင်းပြည် လက်ချိုးလို့ရနေပြီ။အယူဝါဒအစွဲဟာ ကြောက်ဘို့ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီ ၀ါဒကိုပြန့်ပွားဘို့ကြိုးစားရင်း လူပျောက်သွားမယ်။မသိဘူး။ထင်တာပြောတာ။ဒီထက်ရှင်းပြနိုင်တဲ့သူ မန့်မှ တခေါက်ပြန်မာခဲ့ပါမည်။
ပြောမယ့်သာပြောတာ ရှေ့ကို မမှီတော့လည်း တဘောင်တွေ ဘာတွေ ကြားဖူးပေမယ့် ဟုတ်လား မဟုတ်လား။ တချို့တဘောင်တွေတော့ သိဘူး။ ခုပြောတာတွေက ဖတ်တော့ဖတ်တယ် မသိတော့ ဘယ်လိုပြောရပါ့…
–နွေဦးရဲ့ ရှင်းလင်းချက်ကို လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်လည်း အဲဒါကိုခုမှ စဉ်းစားမိတယ်။
မြန်မာတွေ အနောက်(နိုင်ငံ) တွေကိုသိပ်(အလုံးလိုက်အရင်းလိုက်)မပြေးနိုင်သေးဘူးထင်ပါတယ်။
အာစီယံထဲပဲ ၀ဲလယ်နေသလားလို့ (ကျနော့အထင်ပါ)
–မနောရေ သိသလောက်ကလေးကိုပဲ စဉ်းစားကြည့်ရတာပါ။
သောကြာဂြိုဟ်ကြီး လနဲ့ နီး ပြည်ကြီးပျက်လတ္တံ ဆိုတာ ကြာပီ
သောကြာဂြိုလ်မင်း လကိုခွင်းတော့ မင်းရေးကိစ္စ ပေါ်တတ်တယ်ဆိုဘဲ။။
မြန်မာစကားမှာ – နမိတ်ဖတ်တယ် ယတြာကျေတယ် ဆိုတဲ့ စကားနှစ်ခွန်းကလည်း ခေါင်းစားစရာပါဘဲ။
ကောင်းတာတွေကိုတော့ နမိတ်ဖတ်တယ်လို့ယူကြပြီး မကောင်းတာဆိုရင်တော့ ယတြာကျေသွားပြီ လို့ပြောတတ်ကြပါတယ်
တဘောင်ဆိုတာက ချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်တတ်တာရှိသလို၊ နောင်တချိန်မှဖြစ်ပေါ်တတ်တာလဲရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။အဲဒီတော့ ကိုကြောင်လေးရေးပြတဲ့ တစ်ချို့တဘောင်တွေက အခုမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင် နောင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမလားလို့ဘဲစောင့်ကြည့်ပေါ့။ အဲဒီဖြစ်ပျက်တဲ့အထိ အသက်ရှည်စွာ ကိုကြောင်လေး ရှိနေနိုင်ပါစေလို့ဘဲ ဆုတောင်းပေးတာက ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ဟိုစကားရပ်လို(တဘောင်ဟုတ်မဟုတ်မသိပါ) အသက်လေးရဲ့ရှည်စေလို မန်းတောင်ရိပ်ခို ဆိုစကားနဲ့အညီဖြစ်အောင် မန္တလေးမှာနေပါသည်။
ကျွန်မအမြင်ကတော့ ရှေးလူကြီးတွေက …တီထွင်ကြံဆနိုင်မှု သိပ်မများခဲ့ပေမယ် … ရှေ့ရေး နောက်ရေး ကြိုတွေးတတ်ကြတယ် .. ဒီတော့ ဒီစကားတွေကလည်း …စိတ်ကူးနဲ့ ကြိုတွေးပြီးရေးခဲ့တာလို့ ..ထင်ပါတယ် … မှန်မမှန်ဆိုတာကတော့ ပစ္ဆုပန်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး .. ယုံသင့်မှ ယုံရတော့မယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော် …။
တဘောင်တိုင်းမှန်တာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာပါ … ။
ဒါပေမယ့် .. ဒန့် ကျွဲပင် ပုခတ်ဆင်ကတော့ .. နီးတော့ အတော် နီးလာပြီထင်တယ် … ဟီးဟီး ။
ထီးရိုး ကို မိုးကြိုးပစ် – ထီးရိုး = သိုးဆောင်း ( အင်းဂလိပ် ) ။ မိုးကြိုး = ဂျပန် ( ဗိုလ်မိုးကြိုး ) ဆိုတော့ အင်းဂလိပ် ကို ဂျပန်နဲ့ပေါင်းတိုက်ခဲ့တာ ။ ကျွန်တော် ကြားဘူးဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ တဘောင်ကတော့ ” တဝါစံ ခဝါချ ပြီမို့ နာကျတဲ့ အသီးတွေ တွန့်လို့သာကြေ ” ( သီပေါမင်း ခေတ် ) ” အသီးတွေ ရာသီပြောင်း သာသနာ မောင်းရှေကဆော် ။ ဒေါင်းတွေက အော် ” ( ဒါက ၈၈ အရေးအခင်း နဲ့ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး ) ” ဒေါင်းအော်ရင် သူလာလိမ့်မယ် ဂူအောင်းတဲ့ခင်ကြီးပျော်ရယ် သမီးတော်ကို လွှတ်လှဲ့ပါဦး ” ပြီးတော့ – အရှေက နေထွက်တယ် သန်းခေါင်ယံလကွယ်ထက်ဆိုး ——- မင်း ကတန်ခိုးထင် တိုးလို့ပင်ပျက်လို့မဆုံး ” ” ရွှေတိဂုံ ဘုရား မင်းလေးပါးစုံ စပါးတောင်လိုပုံ ဆီကိုရေချိုး ဆေးရိုးမီးလှုံ ” ပြီးတော့ ဒီတဘောင်ထဲမှာ ” ဇာနည် ကြက်မ သူတွန်လျှင် ဇဗျူတခွင် လင်း၍ မဆုံး ” တဲ့ ။ တဘောင်က ရှည်လွန်းတော့ မှတ်မိမှတ်ရာ ရေးလိုက်တယ် ။ ရေးခဲ့သူက အယူတော် မင်ဂလာ ဦးနိုး လို့မှတ်ခဲ့တယ် ။ ဦးနိုး ဟုတ်မဟုတ်တော့ အတပ် မသိ ။ ဦးနိုး မှန်ရင် ဒီတဘောင်က နှစ်ပေါင်း ရာကျော်နေပြီ ။ တဘောင်ပါ အချက်အလက် တွေက မှန်နေတယ် ပြောရမယ် ။
တဘောင်တွေကိုများများစား ရေးပြပေးသွားတဲ့ ကိုရဲရင့်ကိုကျေးဇူးပါ။
အိတုန်ရေ ဒန့်ကျွဲပင် ပုခက်ဆင် ဆိုတာနီးလာပြီးသာပြောတယ်…..အိတုန်တို့ မနောတို့ နဲ့ ရွာထဲကအခြားရွာသူတွေက ဘာလို့ ဝေးနေရသလဲကွယ်….
ကြောင်အသက်က ဆယ်နှစ်လောက်ပဲရှိတာမို့ မမီရင်လည်းနေပါစေတော့ ကေသုံးလုံးရာ……ဒီလောက်ခေတ်ဆိုးခေတ်ပျက်ကြီးထဲ အသက်တစ်ထောင်တော့မနေပါရစေနဲ့…..
တဘောင် အပြင် ဂဏန်း တွေ အကြောင်း စပ်မိ စပ်ရာ ဘာညာမဆိုင် တွေးမိသေးတယ် ။ လူထုခေါင်းဆောင် ( ဒေါ် ) အောင်ဆန်းစုကြည် ( ၁၃၃၂ = ၉ ) ။ သမဒ ကြီး ( ဦး ) သိန်းစိန် ( ၆၃ = ၉ ) ။ ( ဦး ) ရွှေမန်း ( ၄၅ = ၉ ) အဲဒီ ကိုးသုံးလုံး မှာ တစ် နဲ့ ကြတဲ့ ကိုး ဟာ ပါဝါ အားဖြင့် မြင့်တယ်ဗျ ! ၂၀၁၃ ခုနှစ် မှာ မြန်မာ ဟာ အရှိန် အဟုန် နဲ့ ပြောင်းလဲလိမ့်မယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကြမ်မာ ဂဏန်းဟာ ( ၆ ) ။ ဒါကြောင့် အဆိုး အကောင်းတော့ ဒွန်တွဲနေမယ် ။ လေးနာရီ မိနစ် ( ၂၀ ) မှာ လွတ်လပ်ရေးပေးဖို့ သတ်မှတ်ခဲ့တယ် ( ၄း ၂၀ = ၆ )ဖိုးတွမ်တီးနဲ့ ပေးခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးပေါ့ဗျာ။( ၁၉၄၈-၁-၄ – ၄း၂၀ = ၆ ) ။ ( ၈-၈-၁၉၈၈ =၆ ) ။ နောက်ထပ် ထူးခြား တိုက်ဆိုင်တဲ့ ဂဏန်း ( ၆ ) နဲ့ ( ၉ ) အကြောင်းတွေရှိသေးတယ် ။
တစ်ပေါင်မှာ ၁၆အောင်စရှိတယ်လို့တော့ ပေါတာဘဲ။ အဟိ…။
ငါးတွေလဲ ရေထဲမှာ ဖွေးဖွေးလှုပ်ရှိနေပါသည်
ဟိုဒင်းတွေလဲ နေရာတကာ သဲသဲမဲမဲ ဖြစ်နေပါသည်
တပေါင် မှားစေချင်ပါလျှင် ဆင်ခြင်သိတတ်စွာ ပြုမူနေကြပါကုန် ။
ကျွန်တော်ကတော့ တရုတ်ကဖိ ရှမ်းကအိ ရှိတဲ့ဗမာ အနောက်မှာ
ဆိုတာ အနောက်အရပ် ကိုပြောတာ မဟုတ်ဘူး ထင်တာဘဲ
တော်အောင် တတ်အောင် အရည်အချင်း ရှိအောင် မကြိုးစားလို့
အောက်ကျ နောက်ကျ ဖြစ်မှာကို ရည်စူးဟန် တူပါတယ်။
ဦးနေဝင်း အနားယူခါနီး မိန့်ခွန်းထဲ မှာတောင် ဗမာလူမျိုးက အပျင်းထူ
ကြုံတုံး သတိပေးချင်တာက တပေါင်မမှန်စေချင်ရင် တော်အောင်
“တော်အောင် တတ်အောင် အရည်အချင်း ရှိအောင် မကြိုးစားလို့
အောက်ကျ နောက်ကျ ဖြစ်မှာကို ရည်စူးဟန် တူပါတယ်။”
–အံ့သြစရာကောင်းသော က်ိန်းဂဏန်းများပါပဲ၊ကျန်တာလေးတွေလည်း၊ဗဟုသုတမှတ်သားလို့ရအောင် ပို့စ်တစ်ခုအဖြစ်အကျယ်တ၀င့် ထပ်ဖော်ပြပေးပါဦးခင်ဗျာ။
ကြေးမုံဂျီးအမျိုး တရုတ်ကြီး တကယ်ဖိလာရင် မြန်မာတွေ အနောက်ဖက်ပဲ ပြေးစရာ မြေရှိတယ်လေ။ အခြားဘယ်ပြေးဖို့ရှိလို့လဲ။ ပင်လယ်ထဲ ခုန်ချလို့မှ မရတာ။ အရှေ့ဖက်ထိုင်းနယ်စပ်ဆိုတာလည်း ပိကျလာမည့် ရှမ်း၊ ကချင်တွေနဲ့ ပြည့်နေမှာ။ ပြီးတော့ ယပလက်တွေက ဗမာဆိုလက်ခံမယ်မထင်၊ သူ့အမျိုး ရှမ်းတွေကိုပဲ နေရာပေးမှာပေါ့။ ဒီတော့ အိန္ဒိယနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဖက်ပဲ ပြေးစရာမြေ ရှိတော့သပေါ့။ ကျုပ်ကတော့ စိုးရိမ်ပေါင်…ရတနာမိုင်ဂလေးနဲ့ အတူတူ ရခိုင်ပြည်ဂျီးမှာ အခြေချမှာ….
ရတနာမိုင်ကလေး တွန့်ကနဲ…တွန့်ကနဲ ကတာတော့ ကြောင်လေးလဲကြိုက်သဗျာ။